Mid ka mida Culimadii Cafiska lagu sii-daayey oo ka hadlay xadhiggiisii iyo tallaabooyinka uu qaadayo | Berberanews.com
Home WARARKA Mid ka mida Culimadii Cafiska lagu sii-daayey oo ka hadlay xadhiggiisii...
Mid ka mida Culimadii Cafiska lagu sii-daayey oo ka hadlay xadhiggiisii iyo tallaabooyinka uu qaadayo
“Xaq iyo xaq-darraba waa la isku dilaa, waana la isku gefaa, Nebiyo ayaa xaq-darro lagu dilay, waana qadar u qornaa.” Sheekh Muuse Cali Yuusuf.Hargeysa, 23, May 2011 (Ogaal)- Sheekh Muuse Cali Yuusuf oo ka mid ah laba sheekh oo u xidhnaa xukun argagixiso, hase ahaatee dhawaan lagu sii daayey cafis Madaxweynaha Somaliland u fidiyey, ayaa loo sameeyey munaasibad soo dhaweyn ah, isla markaana loogu mahadnaqay Madaxweynaha.
Munaasibaddaas oo xalay lagu qabtay Huteel Shiraaqle ee magaalada Hareysa oo ay ka qaybgaleen dad fara badan oo isugu jiray Madaxdhaqameed, Xildhibaanno, Culimaa’udiin, Ganacsato, Waxgarad iyo Odayaal, ayaa loogu mahadnqay Madaxweyne Siilaanyo oo ergo ay ula tageen koox Culimo iyo Madaxdhaqameed ahi ku sii daayey labada Sheekh, waxa kale oo soo dhaweeyey Sheekh Muuse Cali.
Aadan Axmed Diiriye iyo Cabdillaahi Jaamac oo ka mid ah Ganacsatada dalka ayaa hadallo madasha ay ka jeediyeen mahadnaq ugu jeediyey Madaxweynaha, waxaanay Sheekha kula dardaarmeen inuu ku samro wixii soo maray, isla markaana uu u diyaargaroobo inuu qaybtiisa ka qaato hawlaha dalka ka socda.
Xildhibaan Farxaan Maxamed Cali oo ka mid ah Golaha Wakillada, ayaa isagu si gaar ah ugu mahadceliyey culimadii ergada Madaxweynaha ula tagtay oo uu sheegay inay dadaal badan sameeyeen iyo weliba Madaxweynaha oo uu xusay inuu tixgelin iyo qadarin u muuiyey.
Sidoo kale, Mudane Maxamed Nuur Carraale (Duur) ayaa isaguna sheegay in qaabka loo soo daayey culimadani muujinayo in mabda’a Somaliland ku dhisan tahay ee ah in si furan loo wadahadlo ama loo garnaqsado. “Soo dhawayntani waxay muujinaysaa in aynu nahay ummad garnaqsanaysa oo doodi karta oo wax isku sheegi karta min qofka shacabka ah ilaa madaxweynaha,” ayuu yidhi Md. Duur.
Suldaan Barre Warsame Shire oo isna xafladaa ka hadlay, ayaa ammaanay hannaanka loo maray soo daynta culimadan, waxaannu yidhi; “Qofka khalad iyo xaqba waa loo xidhi karaa, laakiin marka la iska daba tago ee kii khaladka loo xidhay ka soo noqdo haddii uu gefay, kii aan gefina raali ka noqdo waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay in aynu sii wadno haddii aynu nahay Somaliland.”
Ugu dambayntii Sheekh Muuse Cali Yuusuf oo madashaasi hadal ka jeediyey, ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dib loogu soo celiyo xorriyadiisa. “Waxaannu aad Ilaahay ugu mahadinaynaa qadarkiisa in aannu jeelkii muddada aannu ku jirnay annaga oo caafimaad qabna oo dhibi na gaadhin, cillad iyo cudurna aan qabin in aannu soo baxno oo dadkayagii iyo ehelkayagii aannu u nimi, maxaa yeelay dadka waa la xidhaa, waana la is dilaa oo xaq iyo xaq-darraba waa la isku dilaa, waana la isku gefaa, nebiyo ayaa xaq-darro lagu dilay, waana qadar u qornaa.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Muuse Cali Yuusuf.
Sheekh Muuse oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi; “Aniga oo ab iyo abtiba aad ii tihiin, waxaan idiin sheegayaa xumaan idiinlamaan iman, xumaana waddanka kumaan joogin ee dad badani waxay ogyihiin wanaagaan ku joogay, laakiin qadar ayuun baa halkaa i geeyey, haddana wanaagii aan waddanka u hayey in aan ka sii kordhiyo mooyee wax aan ka dhimayo ma laha. Ta labaad waddanka waan u dhashay, waanan ku dhashay Isha Allaahuna in aan ku xijaabto waan rejaynayaa oo aanan meel kale ku dhiman.”
Sheekh Muuse waxa uu u mahadnaqay dhammaan dadkii ka qaybqaatay soo dayntooda, waxaannu yidhi, “Mahadda kowaad waxaan siinayaa Ilaahay, kadibna Madaxweynaha ummaddan hoggaaminaya Axmed Maxamed Siilaanyo ayaan aad ugu mahadnaqayaa, sababtu waxa weeye annagu jeel baanu ku jirnay, waxaan la yidhaa ninku haddii uu xidhan yahay jin baa u warama, war uun baanu heli jirnay oo lama odhan jirin waar xagguu ka yimi, laakiin waa la qaataa uun, waxa nalagu odhan jiray Madaxweynaha ergo ayaa loogu tagayaa oo toddobaadkan waa la idin sii daynayaa Isha Allah, waxa ku xigi jirtay Madaxweynihii wuu diiday inuu idin sii daayo, waxa markaa laga yaabaa in dhawr maalmood ama muddo aad si noqoto oo cunto cuniwaydo, xannuunkaasna waxaannu u bixinay MUUDH, markaa waxaan muudhkii ka caafimaaday maalintii bishu ahayd 17-ka May ee aanu dibada u soo baxnay.”
Waxa kale oo halkaasi ka hadlay Suldaan Yuusuf Muxumed Xiiray, Sheekh Maxamed Ibraahim iyo xubno kale.
Previous articleWar Deg Dega: Ciidammadda Booliska Berbera Oo Hudheel Kala Baxay Xisaabihii Shirkadda TOTAL
Next articleIsku-xidhka Ururrada Xuquuqda Aadamaha oo cambaareeyey tacaddiyo Xukuumadda Siilaanoy kula kacday Saxaafadda xorta ah
Mohamed May 25, 2011 at 11:14 PM
Waxaan la yaabay weli wadaadkan lama xukumin ee waa edaysane markaa ma waxa la leeyahay dambi ayaa lagu waayey mise madexweynaha ayuunbaa iska saamaxay warkani ma cada qof argagixiso lagu eedeeyey waa in la marka la qeexaa in uu dambiile yahay iyo inkale hala iska daayo CAADIFAD aan waxba tarayn.